true investigations /zu-ZA/tools-for-life/investigations/steps/investigation-and-its-use.html read 7 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/investigations_zu_ZA.jpg Uphenyo
Uma uqala ukusebenzisa ukuhlaziya idatha, uvame ukuzama ukuqonda imininingwane ephathelene nokuhlaziywa kwedatha kunalokho okungama-outpoints kudatha. Ikhambi selivele lijwayelekile kakhulu ngezinto zalesi sifundo.
Kulula ukuthola ulwazi lwesigcawu esihle. I-Outpoint ukumuka nje okungenangqondo kusuka esigcawini esihle. Ngokuqhathanisa isigcawu esikhona nesigcawu esihle, ungabona kalula lokho okuvezwayo.
Ukwazi isigcawu esihle, kuzofanela wenze imikhiqizo efanelekile yesigcawu. Uma le mikhiqizo ingaphumi, khona-ke kunokusuka esigcawini esihle. Ungathola izinhlobo ezahlukene zama-outpoints bese uthola u-Why futhi ngaleyo ndlela, uvule umnyango (uholele futhi wenze kwenzeke) ukusingathwa. Futhi ngokusingatha, uzama ukuthola umuntu noma i-organization ukuthi ikhiphe imikhiqizo.
Ngaphandle kokuthi uqhubeke ngale ndlela (ukusuka kumkhiqizo ubuyela kunhlangano), awukwazi ukuhlaziya okuningi kwanoma yini. Uza namaphutha nje hhayi ama-outpoints. Isigcawu esihle sihle njengoba siphuma imikhiqizo yaso, ayiyinhle njengoba ipendwe noma ihanjelwe noma yimuphi umbono womphakathi okhona ngakho.
Kunoma isiphi isigcawu, i-factory ekhiqiza okuthile noma amabutho alwa impi noma unkosikazi wasekhaya enikeza iphathi yedili, kukhona imikhiqizo.
Abantu abahola izimpilo ezingenanjongo bangabantu abanganeme kakhulu. Ngisho nabantu abangasebenzi noma aba-dabble nje futhi abangawenzi umsebenzi wabo ngokuzimisela bajabula kuphela lapho benomkhiqizo!
Kuhlala kukhona umkhiqizo wanoma yisiphi isigcawu.
Oqalayo engadideka bese eqala ukwehluleka uma engalandeli izinyathelo zika:
1. Sebenza ngqo lokho umuntu noma umsebenzi okufanele akukhiqize.
2. Thola isigcawu esihle.
3. Phenya isigcawu esivele sikhona.
4. Landela umkhondo wama-outpoints emuva kusuka esigcawini esihle kuye esigcaweni esikhona.
5. Thola i-real Why lokho kuzoshukumisela okusekhona kuye kokuhle.
6. Bheka izinsiza ezikhona.
7. Thola umbono okhanyayo wokuthi ungasingatha kanjani. Umqondo okhanyayo umqondo osuselwa ku-real Why futhi kufaka ukusetshenziswa kobuhlakani kwezinsizakusebenza (imali, izisebenzi, imishini, izinsiza, izinsiza, amakhono, njll.) Onayo yokusingatha lesi simo.
8. Kusingathe noma usho ukuthi yikuphi ukusingathwa okufanele kwenziwe ukuze kuhlale kusingathwa. Le yindlela yokukwenza eqinisekile ukuthi izosebenza.
Uma uthola nje amaphutha endaweni yesehlakalo, ngaphandle komkhiqizo noma indawo enhle yokuqhathanisa indawo ekhona, ngeke ube wenza ukuhlaziya idatha futhi izimo zizoba zimbi kakhulu ngoba uthola u-Whys ongalungile.
Kufanele ukwazi ukucabanga ngama-outpoints. Indlela enzima yokusho lokhu ukuthi “funda ukucabanga njengesilima.” Ungengeza futhi “ngaphandle kokulahlekelwa yikhono lokucabanga njengobuhlakani.”
Uma ungakwazi ukubekezelela ama-outpoints noma ukubhekana nawo, awukwazi ukuwabona. Umuntu ohlanyayo akakwazi ukubekezelela ama-pluspoints futhi akawaboni. Kepha kungaba khona ama-pluspoints amaningi akuzungezile futhi akukho okukhiqizwayo. Ngakho ke ungatshelwa ukuthi konke kuhle kangakanani ngenkathi indawo isiseduze kokuwa.
Umuntu olalela abantu endaweni yesehlakalo futhi athathe ama-Whys abo usengozini. Ukube lezi beziyiwo ama-Whys, khona ke izinto bezizoba ngcono. Indlela ephephe kunazo zonke ukukhuluma kuphela ngemikhiqizo okufanele ikhiqizwe futhi iphenywe.
Kufanele uqaphele isigcawu esivele sikhona ngokubheka idatha noma ukubheka abanye abantu abasibukelayo noma uzibhekele wena uqobo. Imvamisa kufanele uqagele ukuthi u-Why ungabayini. Kwenza lokho okuletha umqondo wokuthi “Funda ukucabanga njengeslima.”
I-Why izotholakala ekugcineni komkhondo wama-outpoints. I-outpoint ngayinye iwukuphazamiseka lapho iqhathaniswa nesigcawu esihle. I-idiocy enkulu kunazo zonke echaza konke okunye futhi evula umnyango wokuthuthukela endaweni enhle yi-Why.
Kufanele futhi ufunde ukucabanga njengomuntu onobuhlakani ngama-pluspoints.
Thola isikhathi esiphezulu sokukhiqiza (manje noma esedlule). Qhathanisa nesigcawu esivele sikhona ngaphambili. Manje thola ama-pluspoints aqala ngaleso sikhathi. Landela lama-pluspoints bese ufika ku-Why njenge-pluspoint enkulu kunazo zonke evule umnyango wokwenza ngcono. Kepha, futhi uma ubheka izinsiza ezikhona futhi kufanele uthole umbono okhanyayo. Luwuchungechunge olufanayo lwezinyathelo futhi njengalokhu okungenhla kodwa ukukwenza ngama-pluspoints esikhundleni sama-outpoints.